Adze Fofor A Ema W’etsiefo Sũa | Akenkan & Nkyerɛkyerɛ
Adze Fofor A Ema W’etsiefo Sũa
1 Corinthfo 9:19-23
DZA ƆSƐ DƐ EYƐ: Kenyan w’etsiefo no ma wonsusu nsɛm ho, mbrɛ ɔbɛyɛ a wɔbɛtse nka dɛ woesũa biribi a mfaso wɔ do.
Dwendwen dza w’etsiefo no nyim no dada no ho. Dɛ nkyɛ ebɛsan etsĩ dza w’etsiefo no nyim no dada no mu no, boa hɔn ma wonhu w’asɛntsir no wɔ kwan fofor koraa do.
Mma nnsɛɛ ber pii aber a erekã biribi a wonyim no dada ho asɛm no, naaso sɛ erekã biribi fofor a wonnyim ho asɛm dze a, sie abotar.
Yɛ nhwehwɛmu na dwendwen nsɛm ho. Sɛ ɔbɛyɛ yie a, fa nsɛm bi a w’etsiefo no nnhyɛ da nnyim anaa nsɛm bi a woesisi ndaansa yi ara kyerɛkyerɛ wo nsɛntsitsir no mu. Dwendwen wo dwumadzi no ho kɔ ekyir, na hwɛ mbrɛ ɔnye nsɛm afofor a epɛ dɛ edze kyerɛkyerɛ mu no hyia.
Aber a irusũa wo dwumadzi no, bisa woho nsɛm bi tse dɛ ‘ebɛnadze, dɛn ntsi, ebɛn aber, henfa, woana, na ebɛn kwan do’ fa susu nsɛm ho. Sɛ erekyerɛkyerɛ a, bisa dɛm nsɛm yi bi na ma ho mbuae na ama wo dwumadzi no aayɛ ahomka.
Kyerɛ mfaso a ɔwɔ w’asɛm no do. Kyerɛkyerɛ mbrɛ Kyerɛwsɛm no mu nsɛm no botum aboa w’etsiefo no wɔ hɔn da biara da asetsena mu no mu. Tsebea, suban nye ndzeyɛɛ pɔtsee bi a ɔfa w’etsiefo no ho no, ɔno na kã ho asɛm.
Akenkan Na Nkyerɛkyerɛ​—Adze Fofor A Ema W’etsiefo Sũa